Saraakiil ka Socotay Qaramada Midoobay oo Maanta Booqday Degmeda Luuq (SAWIRRO) - Hablaha Media Network
HMN:- Saraakiil ka socday heyaddaha Qaramada Midoobay dhinaceeda gargaarka ayaa maanta booqday degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Luuq ee hoos taga maamulka Juballand ayaa halkaasi ku soo dhoweeyey wafdigan xaqiiqo raadinta ah ee ka yimid magalada Nairobi.
Intii ay joogeen degmeda Luuq ayaa saraakiishan waxa ay booqdeen xeryo ay ku nool yihiin dad ka soo barakacay abaaraha kuwaas oo gabigood xoolihii ay ka dhamaadeen.
Waxana ay u kuur galeen xaalada dadkaasi ay ku noolyihiin iyagoo la yeeshay wareysiyo ku saabsan xaaladooda nololeed iyo dhibaatooyinka ay u geysteen abaarahu.
Saraakiishan oo isla maanta dib ugu laabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in booqashada ay ku tageen degmada Luuq ay aheyd mid sahan ah ayna dhawaan halkaas gaarsiin doonaan kaalmo bani aadamnimo oo ay ugu talo galeen dadka tabaaleysan ee xoolodhaqatada ahaa ee degmedaasi ku soo qaxay.